Global Voices teny Malagasy » Senegaly : Ny « Vaovao Vita Rap », Vaovao An-tSary Tsy Manara-Penitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2013 20:02 GMT 1	 · Mpanoratra Anna Gueye Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Senegal, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Nahita vaovao an-tsary amin'ny endrika vaovao ny mpijery fahitalavitra ao Sénégal , vaovao atolotry ny mpiangaly rap roa malaza ao an-toerana dia i Xuman  (39 taona) sy i Keyti  (40 taona) izay anisan'ny mpitari-tolona nandritra ny fihetseha-panoherana an'i Abdoulaye Wade herintaona lasa izay . Tahaka ny vaovao an-tsary fahita ao Sénégal, dia misy amin'ny fiteny roa ny vaovao vita rap, ny iray amin'ny teny Wolof ary ny iray amin'ny teny frantsay. Miresaka momba ny vaovao politika sy sosialy ary iraisampirenena ao i Xuman sy i Keyti.
Keyti : Teraka tao Saint-Louis  ao avaratr'i Sénégal aho fa lehibe tao Dakar sy Thiès .
Keyti : Toy izay nodiavin'ny ankizy Senegaly antonony amin'ny ankapobeny ihany ny nodiaviko : fototra, lisea ary taorian'ny bac dia nianatra tenim-pirenena vahiny nandritra ny telo taona tao amin'ny Oniversité Gaston Berger ao Saint-Louis  izay nilaozako tamin'ny farany mba hifantohako manontolo tamin'ny mozika.
Keyti : Namoaka rakikira 2 aho (tamin'ny 1998 sy 2001) tamin'ny mbola niaraka tamin'ny tarika nisy ahy taloha tao amin'ny Rapadio  talohan'ny namoahako iray hafa nandehanako samirery tamin'ny 2003. Avy eo aho nanao rakikira iray hafa niaraka tamin'ny Dakar All Stars , niarahana tamin'ny artista telo hafa. Nandray anajra tamin'ny rakikira (Histoires Extraordinaires des Enfants du Poto-Poto ) niaraka tamin'ny artistes 16 avy eto Afrika andrefana (ary anatin'izany i Xuman) ihany koa aho ho fampiroboroborana ny zon'ny ankizy eto Afrika.
Xuman Nandray anjara tamin'ny rakikira 7 aho ka ny dimy niarahako tamin'ny tarika misy ahy dia ny Pee Froiss .
Keyti : Ny lahasako hafa dia mbola manodidina ny rap sy ny mozika ihany. Tamin'ny 2010 paho ohatra nanatontosa lahatsarim-panadihadiana 26mn momba ny rap senegaly natsoina hoe 100% hip-hop . Ankoatra izay dia mandray anjara amin'ny tetikasa sosialy tahaka ny Atrikasam-panoratana sy mozika ampian'ny solosaina any am-ponjan'i Dakar aho.
Ny 2STV (fahitalavitra tsy miankina, isaky ny zoma alina aorian'ny vaovao an-tsary mahazatra ary avy eo efa vonona ao amin'ny YouTube ny ampitso maraina ).
Jereo ihany koa ny fanadihadian'ny Afrik.tv  momba ny “vaovao an-tsary vita rap”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/10/48438/
 fihetseha-panoherana an'i Abdoulaye Wade herintaona lasa izay: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/02/13/97805/
 Oniversité Gaston Berger ao Saint-Louis: http://www.ugb.sn/
 efa vonona ao amin'ny YouTube ny ampitso maraina: https://www.youtube.com/channel/UCImRGQL_sK7OHi1h823Nc0w
 fanadihadian'ny Afrik.tv: http://www.dailymotion.com/video/xzoncg_deux-stars-du-rap-senegalais-lancent-le-journal-rappe_music#.UYv7Y66OhID